Chelsea Oo Xiiseyneysa Saxiixa Garabka Bayern Munich Leroy Sane
HomeWararka CiyaarahaChelsea oo xiiseyneysa saxiixa garabka Bayern Munich Leroy Sane
September 6, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay u dhaqaaqi doonto heshiiska xiddiga garabka uga ciyaara Bayern Munich Leroy Sane inta lagu jiro mid ka mid ah suuqa soo socda.
25 jirkaan ayaa soo maray 14 bilood oo isku xigta Allianz Arena, 19 ka mid ah 49 kulan oo uu ka soo muuqday kursiga keydka.
Maqnaanshihiisa ciyaarta caadiga ah ayaa keentay soo jeedinno ah in xiddiga heerka caalami ee dalka Jarmalka uu u ciyaarayo mustaqbalkiisa kooxda heysata horyaalka Bundesliga.
Warbixinta The Express ayaa sheegeysa in Chelsea ay u furan tahay inay isku keento soo jeedin ay ka mid tahay in mid ka mid ah ciyaartoydooda la siiyo beddel.
Hakim Ziyech , Callum Hudson-Odoi iyo Christian Pulisic ayaa dhamaantood loo soo bandhigay inay yihiin ikhtiyaarrada Bayern, gaar ahaan labada dambe ee midkood lala xiriiriyo ama horay u matalayay Borussia Dortmund.
Sane wali waxaa ka harsan qandaraaskiisa afar sano.